Maro dia maro ireo sarety voasakana ka nanjary nanelingelina sy nampikatso ny fifamoivoizana. Nibahana ny lalana avy any Anosibe mivoaka an’i 67 Ha ireo sarety sy posy. Fandaminana ny etsy Anosibe no takian`ireo mpitarika sarety satria ny tapak`andro maraina izy ireo no tena miasa. Maro rahateo ny mpivarotra mpamongady eny an-toerana. Nilaza moa ireo mpitarika sarety sendra anay fa tsy izy ireo no tena miteraka ny fitohanana raha eny Anosibe fa ireo fiara mijanona amoron-dalana, hany ka tsy afaka maka sisiny izy ireo. Hentitra kosa ireo mpitandro filaminana manara-maso azy ireny. Omaly dia mbola namela ireo sarety nandeha ihany izy ireo. Tsiahivina hatrany fa manomboka amin`ny 7 ora ka hatramin`ny 10 ora maraina, amin`ny 12 ora hatramin`ny 2 ora folakandro ary amin`ny 4 ora hariva mandra-pisavan`ny fifamoivoizana no fotoana tsy hahafahan`ireo sarety sy posy mivezivezy eto an-drenivohitra. Nahitana fitohanana nateraky ny posy sy sarety ihany koa ny teny Andavamamba, Ampefiloha sy Anosy. Asa indray izay hitranga anio.